Ho « Taona fankasitrahana » ny 2016 : rindrankiran’ny Tanora Fanantenana, Amaf, Hosana, Koraïta | NewsMada
Ho « Taona fankasitrahana » ny 2016 : rindrankiran’ny Tanora Fanantenana, Amaf, Hosana, Koraïta
Fampisehoana rindrankira ara-pilazantsara goavana hisantarana ny taona. Fametrahana ho taona fankasitrahana ity taona 2016 ity. Anisan’ireo votoatin’ny seho rahampitso eto an-dRenivohitra ireo…
Voalohan’ny taona, fifanolorana firarian-tsoa eo amin’ny mpiara-belona. Tsy hanalavitra izay ilay fampisehoana karakarain’ny Tanora Fanantenana (FJKM Atsimon’Imahamasina), etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy Fanatanjahantena Mahamasina, rahampitso tolakandro. Rindrankira hirariana ity taona 2016 ity ho « Taona fankasitrahana ».
Seho maimaimpoana, nanasana sy handraisan’ny Amaf (FJKM Andravoahangy Fivavahana), Hosana (FJKM Ambohijatovo Fitiavana), Ny Koraïta (FJKM Manarintsoa Finoana) anjara. Hitondra ny vatsim-panahy ny mpitandrina Ranaivoniarivo Tiana Alisoa. Noraisina ho teny fanevan’ity rindrankira ity ny : « … Tamin’ny taona fankasitrahana no nihainoako anao… ; indro, ankehitriny no andro fankasitrahana… » (Isaia 49:8a – Kor 6:2b).
Raha tsiahivina, antoko mpihira anisan’ny manana ny maha izy azy ireto hanatanteraka rindrankira ara-pilazantsara ireto. Tsy afaka am-bavan’ireo izay nahare izany nandritra ny taona maro ny « Ny marina », « Aza variana », « Taom-pamonjena », sns.
Voalohan’ny taona, fifampirariana soa. Taona vaovao, fankasitrahana an’Andriamanitra Andriananahary noho ireo soa azo avy aminy. Hifanaraka amin’ireo ny tanjaka sy ny kalitaon’ny fanamafisam-peo sy ny hazavana hiasa eny an-toerana.